Kulanka Ugu Horreeya Ee Taageereyaasha Ingiriiska Loo Ogolaan Doono & Garoonka Lagu Ciyaarayo
Wednesday July 29, 2020 - 21:59:02 in Wararka by Editor Caynaba News
Horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa ogaaday waqtiga ugu horreeya ee kooxaha dalkaasi ay dib
u heli doonaan taageereyaashii garoomada soo geli jiray, kuwaas oo ay ugu dambaysay inay garoomada iska soo xaadiriyaan horraanta bishii March.
Ra’iisal wasaaraha UK, Boris Johnson ayaa hore u sheegay in bisha October loo ogolaan doono taageereyaasha inay yimaaddaan garoomada, hase yeeshee xilligaas ayay kasoo horreyn doonaan oo ay jamaahiirtu fursad u heli doonaan inay garoomada tagaan.
Ciyaarta ugu horreysa ee ay taageereyaashu soo cammiri doonaan garoonka ayaa ka dhici doonta garoonka qaranka ee Wembley, halkaas oo ay isku haleeli doonaan labada kooxood ee Liverpool iyo midka soo badiya Arsenal iyo Chelsea oo Sabtida kala qaadi doona FA Cup.
Garoonka Wembley ayaa marti gelin doona ciyaarta koobka ah ee Community Shield marka ay taariikhdu tahay August 29, waxaanu kulankaasi noqon doonaa midka ugu horreeya ee taageereyaashu yimaaddaan.
Xidhiidhka kubadda cagta Ingiriiska ee FA ayaa wada hadallo muddo dheer socday waxa uu kula jiray dawladda si loogu ololaado in ciyaarta Community Shield ay taageereyaashu yimaaddaan.
Xoghayaha Ciyaaraha, warbaahinta iyo Dhaqanka UK, ayaa ugu dambayn u ogolaatay xidhiidhka FA inay ciyaartani noqoto midka lagu daah furayo horyaalka iyo taageereyaashaba, laakiin waxa kaliya garoonka iman doona inta u dhaxaysa 15,000 illaa 20,000.
Warkan oo uu qoray wargeyska The Sun oo aanu kasoo xiganay, waxa uu farxad u yahay taageereyaasha Liverpool oo aan nasiib u yeelanin inay kooxdooda kula dabbaal-degaan Anfield markii ay horyaalka ku guuleysatay laba toddobaad ka hor